फिचर | BikalpaNews.com- the most popular online magazine of Nepal | Page 36
पुनहिलमा सुर्यदयको दृष्य हेर्ने भिड ……….
तस्विरहरु /दिपेन्द्र पौडेलको फेसबुकबाट
म्याग्दीको दुर्गम मुदी गाउँको सुन्दरता .. …..
तस्विर / ठाकुरप्रसाद आचार्य /विकल्प
म्याग्दीको प्रशिद्ध पर्यटकीय स्थल घोडेपानीको पुनहिलमा रमाउँदै पर्यटक । नाकाबन्दीका कारण यसवर्ष पर्यटक आगमनमा असर पुगेको छ
म्याग्दीको प्रशिद्ध पर्यटकीय स्थल घोडेपानीको पुनहिलमा रमाउँदै पर्यटक । नाकाबन्दीका कारण यसवर्ष पर्यटक आगमनमा असर पुगेको छ । तस्विर÷ विविसी
म्याग्दीमा माइक्रोबस दुुर्घटना, आफन्तहरुको अस्पतालमा भिड
तस्विर ः हरिकृष्ण गौतम÷ सन्तोष गौतम
सन्तोष गौतम /विकल्प म्याग्दी कात्तिक २८ गते । म्याग्दीको बेनी नगरपालीका १३ देवीनडाँडामा शनिबार माईक्रोबस दुर्घटना हुँदा तिन जनाको मृत्यु भएको छ । बिस जना घाइते भएका छन् । बरङ्जादेखि सदरमुकाम बेनी आउँदै गरेको ग १ ख ५३६६ नम्बरको माईक्रोबस दुर्घटना भएको हो । दुर्घटनामा बेनी नगरपालीका १३ का ९ वर्षिय सुनिल थापा, ६ वर्षिय […]
गुर्जामा भैलो खेलेर विद्यालयका लागि पाँच लाख संकलन
सन्तोष गौतम / विकल्प म्याग्दी २६ कात्तिक । म्याग्दीको दुर्गम गाविस गुर्जाका बासिन्दाहरुले तिहारको अवसरमा भैलो खेलेर विद्यालयका लागि पाँच लाख रुपैया भन्दा बढी नगद संकलन गरेका छन् । गुर्जा स्थित जनकल्याण मावि सञ्चालनका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउने उद्देश्यले भैलो खेलेर पाँच लाख २३ हजार ८१४ रुपैया नगद संकलन गरीएको विद्यालयका प्रअ रुपेश सुवेदीले जानकारी […]
रेडियो चलाउन देउसी भैलो
रेडियो चलाउन देउसी भैलो / बेनी सदरमुकाममा रहेको सामुदायिक रेडियो म्याग्दी १०४.४ मेघाहर्जले आफ्नो स्तरवृद्धि गर्नका लागि देउसी भैलो मार्फत आर्थिक संकलन अभियान सञ्चालन गरेको हो । तस्विर ठाकुरप्रसाद आचार्य
नेपाल सम्वत ११३६ को अवसरमा बेनीमा बिबिध कार्यक्रम
सन्तोष गौतम /विकल्प म्याग्दी २६ कात्तिक । नेपाल संवत् ११३६ को अवसरमा बिहीबार बेनीमा बिबिध कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । नेपाल भाषा मंका खल को आयोजनामा बेनीमा शुभकामना आदानप्रदान र ¥याली गरिएको हो । जातीय पोषाकमा सजिएका नेवार समुदायले झाँकी सहित बेनी बजारको बालमन्दिरचोक, मंगलाघाट, हुलाकचोक, न्युरोड, क्याम्पसचोक, गणेशटोल हुदै संगमचोक सम्म ¥याली निकालेका थिए […]
एलडिओ साव ! औपचारीकमा मात्र सिमित सामाजिक परीक्षण के का लागि हो ?
विकल्प म्याग्दी, कात्तिक २३ गते । औपचारीकता निभाउन जिल्ला विकास समितिको कार्यालय म्याग्दीको आयोजना र स्कलर नेपाल प्रा.लि काठमाडौंको सहयोगमा सोमबार बेनीमा सामाजिक परीक्षण सम्पन्न भएको छ । सुशासन पारदर्शीता र जवाफदेहिताका लागि आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ मा जिल्लामा सञ्चालित योजनाहरुको प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको हो । सुशासन,पारदर्शीता र जवादेहिताका लागि गरिएको सामाजिक परिक्षण कार्यक्रममा न्यून […]
सिडिओ साव ! ज्ञापन पत्र बुझेपछि बजार अनुगमन हुन्छ त ?
प्रताप बानियाँ / विकल्प म्याग्दी, कार्तिक २३ । बजारमा कालोवजारी र महङगी नियान्त्रण गर्नुपर्ने भन्दै नागरिक समाज म्याग्दीले सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दीमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । म्याग्दीमा पछिल्लो समय कालोबजारीका कारण उपभोक्ताहरु ठगिएका छन् । इन्धन अभावको कारण देखाउँदै केही व्यापारीहरुले उपभोक्ता ठग्ने गरेको गुनासो आउने गरेको छ । नेपालको संविधान जारी भएको अवस्थामा […]
यसवर्ष म्याग्दीमा धान उत्पादनमा कमी आउने
प्रताप बानियाँ \_विकल्प म्याग्दी, कार्तिक २२ । मध्यपहाडी जिल्ला म्याग्दीमा यसवर्ष धान उत्पादनमा कमी आउने भएको छ । खडेरीका कारण समयमै धान रोपाइँ गर्न नपाउनु, पर्याप्त सिँचाइको व्यवस्था नहुनु र धान काट्ने बेला परेको असिनापानीले गर्दा गत वर्षको तुलनामा यसवर्ष धान उत्पादन घट्ने देखिएको हो । जिल्लाको कुल खेतीयोग्य जमिन ३ हजार ८९५ हेक्टरमध्ये ३ […]
महिलाहरुलाई आधारभूत तालिम
प्रताप बानियाँ \_नव विकल्प म्याग्दी, कार्तिक १७ – महिला तथा बालबालिका कार्यालय म्याग्दीको आयोजनामा महिलाहरुका लागि जिल्लास्तरीय आधारभूत तालिम शुरु भएको छ । विभिन्न सिप सिकाई महिलाहरुलाई व्यवसाय शुरु गरी आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले तालिम सञ्चालन गरिएको हो । एक हप्तासम्म चल्ने तालिममा महिला विकास कार्यक्रम, समूह गठन, बचत परिचालन, नेतृत्व, सञ्चारका सिपहरु, प्रजनन स्वास्थ्य, सुरक्षित […]
प्रहरीकै पोष्ट नजिक यात्रुहरु तेब्बर बढी भाडा तिर्न बाध्य
विकल्प \_ दसै मनाएर फर्कने म्याग्दीका सर्वसाधारण तेब्बर बढी गाडी भाडा तिरेर गन्तब्यमा पुग्न बाध्य भएका छन् । सदरमुकाम बेनी देखि बागलुङ, कुश्मा, पोखरा, चितवन, भैरहवा, राजधानी लगायतका ठाउँमा छुट्ने बसलाई तेब्बर बढी भाडा तिर्न बाध्य भएका हुन् । बेनी पोखरा रुटमा चल्ने बस, माईक्रोबस, जिप र ट्याक्सीहरुले मनपरि भाडा लिने गरेको यात्रुहरुले गुनासो गरेका […]
सन्तोष गौतम,नवविकल्प÷ गत बैशाखको बिनासकारी भुकम्पका कारण थलिएको नेपालको पर्यटन क्षेत्र पछिल्लो समय सिमा क्षेत्रमा भएको नाकाबन्दी र इन्धन अभावका कारण झनै प्रभावित बनेको छ । भुकम्पले असर नगरेका नेपालका पर्यटकीय स्थलहरुमा तराई मधेश क्षेत्रमा जारी आन्दोलन, बन्द हडताल, नाकाबन्दी र इन्धन अभावका कारण पर्यटक आगमन प्रभावित बनेको हो । सिमा क्षेत्रको असहज परिस्थितीका कारण […]